Raiso ny Ubuntu sy ny tsiro ofisialy | Ubunlog
Raiso ny Ubuntu sy ny tsiro ofisialy azy
Ny iray amin'ireo fiasa malaza indrindra amin'ny Ubuntu sy GNU / Linux amin'ny ankapobeny dia, azo antoka, ireo karazana fizarana izay ananantsika. Raha ny marina dia maro amin'izy ireo no miorina amin'ny distro malaza kokoa, toy ny Ubuntu sy ireo tsiro ofisialy fanta-daza ao aminy.
Misy isan-karazany ny fizarana mifototra amin'ny Ubuntu, izay, araka ny efa nolazainay, dia nantsoina tsiro ofisialy. Manomboka amin'ny distros miaraka amina birao azo odiam-bolo, toa an'i Kubuntu, hatrany amin'ny distros mba hampiasa loharano vitsivitsy sy hiasa maivana amin'ny PC, toa ny tranga misy an'i Lubuntu. Ao Ubunlog izahay dia te-hijery ireo tsiro Ubuntu ofisialy ary hanazava ny fomba ahafahantsika mahazo azy ireo.
Araka ny hitanao, ny toetran'ny tsiro tsirairay dia miovaova arakaraka ny toetran'ny masinina sy ny mpampiasa izay hampiasa izany fizarana izany. Amin'ireo hevitra kely rehetra hataonay isaky ny distro dia hiresaka momba ny fomba sy ny toerana anaovana ny sary ISO isaky ny fizarana izahay.
Ka raha tsy hainao ny manoratra sary amin'ny fitaovana fitehirizana dia azonao atao ny mijery azy this entry izay nosoratanay herinandro vitsivitsy lasa izay izay nanazavanay ny fomba hanaovana izany ao amin'ny Ubuntu. Nanomboka izahay.
Manomboka any am-pianarana koa ny fampianarana siansa momba ny informatika. Noho izany, misy tsiro ofisialy ofisialy ampiasaina any an-tsekoly. Ny iray amin'ireo toerana an'ity fizarana ity, mifototra tanteraka amin'ny foto-kevitra momba ny Free Software, dia ny fahalalana sy ny fianarana tokony ho azon'ny tsirairay maniry hivoatra amin'ny maha olona azy ary hanatsara ny tontolo manodidina azy.
Mba hametrahana Edubuntu amin'ny PC-tsika dia afaka ataontsika amin'ny fomba roa. Raha te hametraka Edubuntu amin'ny masinina efa nametraka Ubuntu izahay dia apetraho fotsiny ny iray amin'ireo fonosana ireo na avy amin'ny Synaptic Package Manager na mivantana avy eo amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fampiharana ny baiko:
sudo apt-mahazo hametraka package_name
Ny fonosana izay tsy maintsy apetratsika dia miankina amin'ny làlana hampiasain'i Edubuntu. Ireto ny lisitry ny fonosana:
ubuntu-edu-preschool ho an'ny Sekolin-jaza.
ubuntu-edu-Kilonga ho an'ny Kilonga.
ubuntu-edu-faharoa ho an'ny Secondary.
ubuntu-edu-tertiary ho an'ny Oniversite.
Raha tsy manana Ubuntu napetraka ao amin'ny masininay isika dia afaka misintona ilay sary distro avy eto, miankina amin'ny maritrano an'ny PC-nay.
Ity distro ity angamba dia iray amin'ireo tsiro ofisialy ofisialy be mpampiasa sy malaza indrindra. Araka ny tondroin'ny anarany, io distro io dia mampiasa ny GNOME ho tontolon'ny birao misy azy. Raha te hahita ny fomba fisehoan'ity distro ity amin'ny solosaina PC ianao dia manokan-tena ao Ubunlog fidirana amin'ity distro ity sy ny zavatra niainako manokana niaraka taminy. Ity distro ity dia miavaka amin'ny fahaizany mampiavaka azy manokana sy ny endriny faran'izay kely indrindra sy kanto.
Raha misintona ny sary dia azontsika atao izany tranokala ofisialiny. Raha efa manana tsiro Ubuntu hafa napetraka ao amin'ny PC ianao dia azonao atao ny mametraka Ubuntu GNOME amin'ny alàlan'ny fandefasana ity baiko manaraka ity:
sudo apt-mahazo mametraka Ubuntu-gnome-desktop
Ary raha te-hanala ireo fonosana Ubuntu izay tsy ilaina ianao dia azonao atao amin'ny alàlan'ny mihazakazaka:
sudo apt-get purge fananganana ubuntu-default-setting
sudo apt-mahazo fanadiovana ubuntu-desktop
sudo apt-mahazo autoremove
Na dia Ubuntu miaraka amin'ny GNOME aza dia iray amin'ireo diso malaza indrindra sy azo ovaina, Kubuntu, ny tsiro izay mampiasa ny KDE Plasma 5 ho toy ny tontolon'ny birao, dia tsy dia lavitra ao aoriana. Ity fisehosehoana ity dia manana endrika kanto ihany koa ary azo namboarina ihany koa.
Raha te-hametraka an'ity tsiro ofisialy ity amin'ny PC ianao dia azonao atao ny misintona ny sary ISO avy aminy eto. Averina indray, raha efa manana Ubuntu napetraka ianao dia azonao atao ny mametraka Kubuntu amin'ny alàlan'ny fandefasana ireto baiko manaraka ireto:
sudo apt-mahazo hametraka kubuntu-desktop
Azonao atao ihany koa ny manala fonosana izay tsy ilaina intsony amin'ny alàlan'ny fampandehanana ireo baiko voalaza ao amin'ny fizarana Ubuntu GNOME.
Na izany na tsy izany, raha mila tutorial amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fametrahana an'ity tsiro ofisialy ity ianao, dia mamporisika anao izahay hamaky this entry nanoratra izahay rehefa nivoaka ny Kubuntu 15.04.
Ity fizarana ity, farafaharatsiny ho ahy, zavatra miavaka. Ary i Ubuntu Kylin dia miorina amin'ny fampiasana azy any Shina ary hanomezana fahafaham-po ny filàna mety hananan'ny mponina eto amin'ity firenena ity. Raha mamaky aminay avy any Shina ianao ary tsy miandry ny mametraka an'ity tsiro ofisialy ity dia azonao atao ny misintona azy eto.
Raha zavatra taloha ny PC-nao na tsy dia manana toetra mampiavaka azy dia Lubuntu no vahaolana. Ity tsiro ofisialy ity dia miorina amin'ny fandidiana maivana satria tsy mandany vola firy. Misaotra ny fampiharana maivana izay efa ampiasain'ny biraonao LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).
Ity tsiro ofisialy ity dia afaka mihazakazaka tsy misy olana amin'ireo milina izay manana RAM 256 ka hatramin'ny 384 MB ihany. Ka raha mila hazavana Operating System ho an'ny solosainao izay tsy manana loharano be ianao na te hanandrana ny endrika minimalistin'ity tsiro ofisialy ity dia azonao atao ny misintona Lubuntu eto.
Raha efa manana tsiro ofisialy Ubuntu ianao dia azonao atao ny mametraka ny Lubuntu mivantana avy amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fonosana Lubuntu mifanaraka aminy. Mba hanaovana izany dia alefaso ity baiko manaraka ity:
sudo pat-get hametraka lubuntu-desktop
Azonao atao koa ny mametraka ny fonosana lubuntu-desktop mitady azy ao amin'ny mpitantana fonosana Synaptic.
Ity tsiro ofisialy ity dia kendrena amin'ny fametrahana rafitra mifototra amin'ny MythTV, mpandrakitra horonantsary nomerika maimaimpoana tanteraka ao anatin'ny lisansa GNU GPL. Mythubuntu dia natao hampidirina tsara amin'ny tamba-jotra MythTV efa misy. Ho fanampin'izay, araka ny aseho amin'ny tranokalan'ny ofisialin'izy ireo, ny rafitr'i Mythubuntu dia mamela fiovam-po tsotra avy amin'ny birao Ubuntu mahazatra mankany Mythbuntu ary ny mifamadika amin'izany. Raha hametraka azy io dia azonao atao ny miditra amin'io rohy. Raha efa nametraka ny Ubuntu amin'ny PC ianao dia afaka mikaroka mivantana ny Mythbuntu ao amin'ny Ubuntu Software Manager ary miroso amin'ny fametrahana.
Raha manokan-tena amin'ny sehatra mifandraika amin'ny famoronana multimedia na fanovana ianao, na mozika, sary, horonan-tsary, endrika sary ... Ity no tsiro Ubuntu ofisialy izay mety aminao. Ity distro ity dia manana rindrambaiko haino aman-jery maro maimaimpoana efa napetraka efa niorina tsara tamin'ny fanovana sy famoronana atiny multimedia. Iray amin'ireo tanjon'ity tsiro ity ny hampanakaiky an'izao tontolo izao ny GNU / Linux amin'ireo rehetra izay manolo-tena amin'ny sehatry ny haino aman-jery. Izy io koa dia mikendry ny ho tsotra hametraka sy hampiasa araka izay azo atao ka tena azon'ny rehetra idirana.
Azonao atao ny misintona ny sary ISO an'ity tsiro ofisialy ity avy amin'ny eto.
Xubuntu dia tsiro ofisialy Ubuntu izay mampiasa XFCE ho tontolo desktop, izay toa an'i LXDE, dia tontolo maivana tokoa. Xubuntu dia distro kanto, mora ampiasaina, ary azo ovaina be. Izy io dia lamina mety indrindra ho an'ireo izay te-hahazo tombony betsaka amin'ny birao misy azy ireo mijery maoderina ary miaraka amin'ireo toetra ilaina mba hananana fiasa tena optimum.
Mba hahazoana Xubuntu dia azonao atao izany Ity rohy ity, izay ahafahanao misafidy karazana masinina tianao alaina ity tsiro ofisialy ity.
Raha efa nametraka ny Ubuntu amin'ny PC ianao dia azonao atao ny mametraka Xubuntu amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo fonosana mifandraika amin'izany. Mba hanaovana izany dia tanteraho ity baiko manaraka ity:
Raha te hahalala amin'ny antsipiriany bebe kokoa ireo toetra asehon'ity fizarana ity ianao, dia azonao atao ny mijery azy ny fidirana nosoratanay tao Ubunlog rehefa nahita ny jiro ilay kinova farany.
Iray amin'ireo tontolo iainana manome resaka foana (amin'ny fomba tsara) dia MATE. Raha aleonao ny mampiasa ny birao Ubuntu nentim-paharazana, dia ity no tsirony ofisialy. Ho fanampin'izay, ny fepetra takiana amin'ny fitaovana dia tsy mitaky be loatra, fa somary maotina kosa, satria ny kely indrindra azonao atao mba ahafahanao mihazakazaka ny kinova farany amin'ity fizarana ity dia 512 MB RAM, kapila matevina 8 GB ary processeur iray avy amin'ny fianakavian'i Pentium. III.
Raha te-hametraka an'ity tsiro ofisialy ity ianao dia azonao sintonina avy amin'ny pejy ofisialy. Toy ny mahazatra dia azonao atao koa ny mametraka azy avy amin'ny Ubuntu raha toa ka efa napetrakao izy io.
Voalohany dia tsy maintsy ampidirintsika ny kitapom-bolan'ny Ubuntu Mate amin'ny alàlan'ny fampiharana ireto baiko manaraka ireto:
Avy eo manavao fonosana izahay:
Ary farany mametraka ny tontolo iainana amin'ny:
sudo apt-get install –no-install-fahazoan-dàlana ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
Afaka manaraka an'io ianao torolàlana fametrahana avy amin'ny Ubuntu MATE izay navoakanay tao Ubunlog volana roa lasa izay.
Raha fintinina dia manantena izahay fa ity fidirana Ubunlog ity dia nanompo anao ary ankehitriny dia azonao atao ny manamora kokoa ny manapa-kevitra izay tsiro Ubuntu ofisialy hapetraka ao amin'ny PC-nao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Raiso ny Ubuntu sy ny tsiro ofisialy azy
Juan Jose Cabral dia hoy izy:
Ho ahy dia i Mate no birao tsara indrindra
Valiny tamin'i Juan José Cabral
Eudes Javier Contreras Rios dia hoy izy:
Ny Plasma 5 dia tsy azo namboarina tahaka ny teo alohany KDE4, ny desktops dia tsy afaka manana endrika tsy miankina noho izy ireo dia faritra iasana tsotra (toy ny DE hafa), tsy manana plasmoids (widgets) marobe izy io, mampikatso ny fifangaroana sary raha tsy tianao apetraho ny rindrambaiko manana. Ny andrana farany apetraka - izany tamin'ny herinandro lasa teo - dia tsy nahomby satria tsy mandeha ilay kisary hampihetsika ny wifi hanatanterahana ny fizotrany amin'ny PC misy ifandraisako amin'ilay tamba-jotra.
Ho an'ireo "pitsopitsony madinidinika" ireo dia mampiasa LinuxMint miaraka amin'ny KDE4 aho ary hanohy hampiasa izany raha mbola azoko atao; avy eo rehefa tsy misy intsony ny KDE4 amin'ny disto rehetra, dia hieritreritra momba ny kanelina, mate, na firaisana aho.
Valiny tamin'i Eudes Javier Contreras Rios
Ahoana ny fomba hametahana kapila mafy rehefa manomboka Ubuntu
Lohahevitra kanto 3 ho an'ny Ubuntu